Abazali bakhiphe izingane esikoleni "esinobungozi" - Ilanga News
Home Izindaba Abazali bakhiphe izingane esikoleni “esinobungozi”
Abazali bakhiphe izingane esikoleni “esinobungozi”
lzingane bathi zibuye zidlale ngezintambo zikagesi ezilele phansi
ELINYE lamagumbi aseNkasana Primary School, elapheshulwa yisiphepho, kwathinteka nezindonga zamanye, osekufake itwetwe kubazali babafundi.
KUKHALA ibhungezi eNkasana Primary School, eWeenen, emuva kokuba ngeledlule abazali begasela kulesi sikole kungazelele muntu, bakhipha izingane zabo bashiya othisha egunjini labo lekhefu (staff room) bemangele ngoba bethi besaba ukuthi hleze zilimale njengoba zifundela ezingebedwini ngenxa yokuphephuka kwamanye amagumbi ngesikhathi kunesishingishane ngenyanga edlule. ILANGA lithole ukuthi okunye okufaka itwetwe kubazali ngokuphepha kwezingane zabo, yizintambo zikagesi okuthiwa zasala zi ngaqoqiwe emuva kokunqamuka kwezigxobo ngesikhathi kuphephuka uphahla lugaxela kuzona.
UMnu Enock Mungwe, ongusihlalo wesigungu esilawula isikole eNkasana, uvumile kwiLANGA ukuthi ngeledlule bafikile abazali bakhipha izingane zabo, bethi kabakwazi ukuziyekelela zifundele emakilasini angenalo uphahla njengoba kunamanye amagumbi abhidlikelwe yizindonga. Uthi nezintambo zikagesi ezilele phansi, nazo zibafaka amanzi emadolweni ngoba izingane zibuye zizidlalele ngazo, okungaziwa ukuthi zinomlilo yini noma kazinawo. “Isikole sethu sidala futhi besinganakekelwa. Kuthe uma kuhlasela isishingisane kwaphephuka uphahla. Abazali batshela isigungu ukuthi kazisaphephile izingane zabo. “Kwenzeka lokhu nje, vele sishodelwa ngothisha abawu-5 esikoleni sethu, kuhlangene nothishomkhulu owathatha umhlalaphansi nyakenye.
“Yenziwa inhlolokhono kathishomkhulu, kwaba khona ophumelelayo, kodwa kuze kube yinamhlanje, akakaze aqale emsebenzini futhi kasitshelwa lutho ngokungafiki kwakhe. “Sikholwa wukuthi ukube isikole sinenhloko ngabe kasikho kulolu bishi ngoba ngabe iyawubona wonke umonakalo okhona, ithinte izinhlaka ezifanele. “Abazali bathembise ukubuyisela izingane zabo esikoleni uma sesilungisiwe, nesibalo sothisha sesanele. Kuyimanje isikole kasinamuntu, othisha bazihlalela bodwa estaff room balinde isikhathi abaphuma ngaso,” kusho uMnu Mungwe.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthe bayasazi isimo esibhekene nesikole iNkasana, wathi umnyango uzama ukuphuthumisa uhlelo lwaso ukuze abafundi babuyele ngokushesha esikoleni. “Sizwile ukuthi abazali bazikhiphile izingane esikoleni ngoba bethi basaba ukuthi kaziphephile. Siwumnyango sifake isicelo sokuthola amagumbi okufundela angomahamba nendlwana. “Sisawalindile ngoba inkampani esihlinzeka ngawo, ithe isaphele-lwe ngokunye kokuwakha. “Olokushoda kothisha kulesi sikole, kungenzeka ukuthi kukhona umnyango osakucubungula njengoba nothishomkhulu owayesetholiwe engakaqali emsebenzini,” kusho uMnu mahlambi.
Previous articleBakhethe ukumba izihlobo kusikwa iziza emathuneni
Next articleKugwazwe iphoyisa emagcekeni esiteshi